Maitiro ekuita kuti mukadzi ade newe ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ndoita sei kuti mukadzi ade iwe. Zvinonzi kudanana nomumwe munhu ndeimwe yenguva dzinofadza zvikuru muupenyu hwedu. Kudanana nemukadzi kwakaoma, uye kuti uzviite unofanira kutora zvombo zvako zvese. Asi iwe unogonawo kurambwa naye, uye kudzivirira izvi kuti zvirege kuitika, takagadzira chinyorwa ichi nemamwe matipi ekutanga kumukadzi wezviroto zvako kuti amuone ari nani hafu. Rombo rakanaka!
1 Ndoita sei kuti mukadzi ade newe step by step
1.1 1. Iteerere
1.2 2. Iva munyoro
1.3 3. Pfeka zvakanaka kuti mukadzi akuda
1.4 4. Usazvitutumadza
1.5 5. Usafuratira
1.6 6. Mufonere after the first date kuti akudane newe
1.7 7. Enda zvishoma nezvishoma
1.8 8. Iva akanaka kushamwari dzako
1.9 9. Tungamira ukama hwako
1.10 10. Iva nerudo zvekuti mukadzi anokuda
1.11 11. Zvizivise kumhuri yako
Ndoita sei kuti mukadzi ade newe step by step
Hakuna mukadzi akafanana nemumwe, ndosaka varume vazhinji vachitya kana vachikumbira kupfimbana. Ivo havazivi kuti voita sei, kuti mukadzi uyu angazvifarira uye vanofunga kuti havazozvikwanisi.
Tevere tichakupa mamwe matipi ekutanga achakubatsira iwe kuzadzisa chinangwa chako che ita kuti mukadzi ade newe.
Vakadzi vese vanofarira kutaura nekunzwikwa. Pazuva rekutanga iwe unogona kutaura nezve zvisingaverengeki misoro, uye kana iwe uchida kuita kuti anzwe akakosha, teerera kune zvese zvaanokuudza uye taura naye. Aya matangiro akanaka uye anokubatanidza iwe kuburikidza nekuchinjana kwemazano.
2. Iva munyoro
Kana tichitaura nezvekuva munyoro hazvirevi kuti unofanira kuva muchinda anoyevedza. Kuva gentleman une chikwereti cheteita zvine ruremekedzo, zvinyoro, uye zvine mufungo. Somuenzaniso, vhura suo reresitorendi kana kuti motokari kuti apfuure uye usashandisa mashoko okutuka kana kutaura panguva yacho. Zvakare, usatombofunga nezvekuita zvepabonde sezvo zvingave zvisiri panzvimbo uye kugadzira nharaunda yakanaka ine makakatanwa. Mava kuzivana, hamusi vaviri.
3. Pfeka zvakanaka kuti mukadzi akuda
Hakuna mukadzi achafunga kuti murume muupenyu hwake itype inopfeka hembe dzine tsvina uye ane hwema hwakaipa. Varume vakagerwa vakachena kana kuti vane ndebvu dzakanyatsokwenenzverwa, vanonhuhwirira, vane bvudzi rakachena uye zvipfeko zvinomira pachena nekuda kwekudzikama kwavo ndezvinyorwa zvinowana mapoinzi akawanda kubva kumukadzi waunoda.
Kune varume vanoda kushamisira nebasa kana pfuma, asi izvi Haisi chinhu chaunofanira kuita pamberi pemukadzi waunoda kukunda. Iyewo haadi kuti utaure nezvezvinhu zvausina, sezvo kana pari pacho hapana chaungazokwanisa kumufadza.
Kana wawana mukadzi akakwana uye uchida kuti ade newe, unofanira kuisanganisira muhurukuro neshamwari dzako. Edza kutaura nezvenyaya dzinomufadzawo, uye rega ataure zvaanofunga. Kutaura nezvemotokari, nhabvu, uye mamwe madzimai hazvitombofungiki. Ita shuwa kuti shamwari dzako dzinozivawo kuchengetedza kudzikama uye kuve nemisoro yakasiyana yekutaura nezvayo.
6. Mufonere after the first date kuti akudane newe
Kana ukamufonera zuva rakatevera zuva rako rekutanga, mukana wekuti ade newe unowedzera zvakanyanya. Usatambe zvinokanganisa, hazvina maturo. Chaunofanirwa kuita kumufonera kuti uone kuti ari sei, muudze kuti wafarira kusangana naye uye kuti unoda kumuona zvakare. Kana achida chaizvo kukuziva zviri nani, achabvuma kukokwa. Usamukurira kusvika zuva rechipiri rasvika nechuru chemeseji nefoni, masocial network kana email.
7. Enda zvishoma nezvishoma
Varume vazhinji vanotarisira kuti mushure mekutanga kwekutanga, chimwe chinhu chepedyo chichaitika. Asi ukama hwapedyo hunoda nguva, ruremekedzo, mutoro, uye kuzvipira. Muremekedze kupfuura zvimwe zvese. Murume anofunga izvi, anoremekedza chisarudzo uye nguva iyo mumwe munhu anoronga.
8. Iva akanaka kushamwari dzako
Kuziva denderedzwa reshamwari dzako inenge itsika, uye ndipo paunowana mvumo kana kusatenderwa kubva kwavari. Izvi zvakakosha zvikuru kwaari, saka iva neruremekedzo uye ushamwari. Taura navo usingatyi kuti uri zvauri chaizvo. Pakupedzisira, kuve pachena sezvinobvira chinhu chakanaka kwauri.
9. Tungamira ukama hwako
Kana wafunga kuva nemukadzi, Iwe unofanirwa kuve wakajeka pane zvaunotarisira kubva kuhukama. Kana usingaone ramangwana naye, gumisa kupfimbana kwako, asi usave naye nekuda kwekurwadziwa kana kunyaradzwa. Kana, kune rumwe rutivi, uchida kuti ive yako nokusingaperi, roora. Zviri nyore. Vakadzi vanofarira kuziva kwavari kutsika.
10. Iva nerudo zvekuti mukadzi anokuda
Kuita zverudo hakusi kuita chisi. Romanticism ndizvo musanganiswa wezviito zvechivalrous, sekubhadhara bhiri reresitorendi, nezvinoshamisa zvishoma zvinogona kubva pakumupa ruva pasina chikonzero chekumusuma kune vamwe semusikana wako (kana ari chaizvo).
11. Zvizivise kumhuri yako
Kusuma mukadzi waunoda kumhuri yako kwakafanana nekusunga chitsidzo. Saka kana uine chokwadi chekuti ndiye mukadzi wehupenyu hwako, enda. Hazvidikanwi kugadzirira kudya kwemasikati kana kudya kwemanheru kuti munhu wose azivane. Chete pfeka semudiwa wako kumusangano wemhuri kana pati. Yakanyanya kusununguka uye hauzonzwe usina kuchengeteka nezvekusangana nemunhu wese. Asi yeuka kusamusiya ari ega chero nguva ipi zvayo.
Kana uchida kubudirira woita kuti mukadzi ade newe, gadzira nzira yekuva iyo inobatanidza zvese izvi hunhu muhunhu hwako. Isu tinokuvimbisa iwe kuti mukadzi wezviroto zvako haakwanise kuramba kuva nezuva newe uye, netariro, kuva zvese parutivi rwako.
Kana iwe uchida kuramba uchiwedzera ruzivo rwako, shanyira zvimwe zvinyorwa zve chemada.online